Oovimba beemarike zehlabathi
Udidi: Marike yehlabathi
UCharlie Munger Ubolisa iChina nge-Crypto Ban, uhlala echaswa ngokukrakra kwi-Crypto Investing
USekela-sihlalo waseBerkshire Hathaway uCharlie Munger mva nje wenza amagqabantshintshi ngokuvalwa kwe-cryptocurrency eTshayina, ephawula ukuba isizwe saseAsia "Wenze into elungileyo."
Munger-ehlala ebizwa Warren Buffett ekunene-isandla-izandla zakhe malunga cryptocurrency kwi Sohn Hearts and Minds, isiganeko inkulumbuso Australian usozimali ngoLwesihlanu odlulileyo. Igqala lotyalo-mali ngaphambili lalibiza iBitcoin "Ityhefu yempuku" kwaye uthelekise urhwebo lwe-cryptocurrency kunye "abarhwebi." Ethetha ngemozulu yangoku yotyalo-mali, uMunger uqaphele ukuba:
"Ndicinga ukuba i-dot-com boom yayiphambene ngokumalunga noqikelelo kunale nto sinayo ngoku. Kodwa lilonke, eli xesha ndilithatha njengeliphambene kunexesha le-dot-com. "
UMunger uphinde waphawula ukuba: “Andinakumela ukuthatha inxaxheba kolu qhushululu, nangayiphi na indlela. Kubonakala ngathi kusebenza. Wonke umntu ufuna ukuphumla. ”
Oko kwathiwa, uSekela Sihlalo waseBerkshire Hathaway waxoxa ukuba ujonge izinto ngokwahlukileyo, echaza ukuba: “Ndifuna ukwenza imali ngokuthengisela abantu izinto ezibalungeleyo, kungekhona ezibaphatha kakubi." UMunger uphendule wathi: "Ndikholelwe, abantu abenza i-cryptocurrencies abacingi ngomthengi, bacingela ngokwabo."
Umtyali-mali onamava waqinisekisa ukuba: Andisokuze ndithenge i-cryptocurrency. Akwaba ngengazange bayilwe.” UCharlie Munger waphinda waphawula ukuba:
“Ndicinga ukuba amaTshayina enze isigqibo esichanekileyo, sokuwavala nje. Ilizwe lam—impucuko yabantu abathetha isiNgesi—lenze isigqibo esiphosakeleyo.”
Usekela-Sihlalo weBerkshire Hathaway, uCharlie Munger.
UCharlie Munger ubona ubudlelwane obungcono phakathi kwe-US kunye neChina ngoNcedo lwase-Australia
U-Munger uphinde wavakalisa ithemba lakhe nge-China, apho i-Berkshire Hathaway ibambe utyalo-mali olubalulekileyo, kuquka umenzi wezithuthi i-BYD. U-Vice-Sihlalo waphawula ukuba wayekholelwa ukuba i-US ne-China inokwakha ubudlelwane obungcono ukuba bazama. Wacebisa ukuba "I-Australia, ngokubandakanyeka kwayo ngokunzulu eTshayina, inokuba kwindawo eyakhayo," ukongeza oko "I-Australia inokukhuthaza i-United States ne-China ukuba zibe nengqiqo ngakumbi."
Umcimbi wangoLwesihlanu wawungeyokuqala uMunger evakalisa esidlangalaleni izimvo zakhe malunga neBitcoin kunye ne-crypto. NgoMeyi kulo nyaka, wathi: "Ndimele nditsho ngokuthozama ukuba lonke uphuhliso olubi [i-crypto] luyacekiseka kwaye luyaphikisana nomdla wempucuko."
Ngeli xesha, ngoFebruwari, walumkisa abatyali-mali ukuba bahlukane neBitcoin, esithi: “Ngenene luhlobo oluthile lokwenziwa endaweni yegolide. Kwaye ekubeni andizange ndithenge nayiphi na igolide, andizange ndithenge nayiphi na i-bitcoin, kwaye ndincoma abanye abantu landela umsebenzi wam.”
tags Bitcoin, UCharlie Munger, Cryptocurrency, iindaba
Isikwere sokuNceda iBitcoin ibe yiMali yoMthonyama kwi-Intanethi
Inkampani enkulu yesisombululo sentlawulo isikwere I-Inc. iphinde yaphinda ukunyaniseka kwayo kwi Bitcoin kwingxelo yayo yengeniso ye-Q3 esanda kukhutshwa ngoLwesihlanu odlulileyo.
Inkampani yeentlawulo ibonise ukuba i-Cash App, iqonga layo lokuhlawula, livelise i-$ 1.8 yezigidigidi kwingeniso ye-BTC kwi-Q3, 2021. Oko kwathiwa, ixabiso lenkampani liye lafumana i-110 yeebhiliyoni eziqinileyo.
Ngexesha lomnxeba wemivuzo, i-CEO ye-Square Inc. uJack Dorsey wabuzwa ukuba kungenzeka na ukuba inkampani yakhe ikhule ngaphaya kokuthenga nokuthengisa i-Bitcoin kwimisebenzi ye-crypto ebaluleke ngakumbi njengokubonelela ngezinye ii-cryptocurrencies kunye nokuvumela abasebenzisi ukuba bafikelele kwi-ecosystems ye-NFT. Kule nto, uDorsey waphendula, “Asikho,” Yongeza ukuba:
“Sigxile ekuncedeni i-bitcoin ukuba ibeyimali yemveli kwi-Intanethi … Sineqela lamanyathelo azama ukufezekisa le njongo. ICash App yenye nje.
I-CEO ye-billionaire yachaza ukuba: “Sizakwakha isipaji sehardware. Sihlola imigodi ye-bitcoin, isixhobo sabathengi sokumba i-bitcoin ekhaya okanye kwishishini okanye kumashishini abathengisi, enyanisweni. Sikholelwa ukuba le ngqwalasela ibalulekile. Sikholelwa ukuba ilungile.”
Isikwere ukuQalisa i-TBD yokuphucula iiNkonzo zeBitcoin
Ngeli xesha, uDorsey wathetha ngeyunithi entsha yeshishini ebizwa ngokuba yi-TBD, ephawula ukuba: "Sikwasandula ukwenza ishishini elibizwa ngokuba yi-TBD [ukwakha] iqonga lophuhlisi elivulekileyo ngenjongo eyodwa yokwenza kube lula ukwenza iinkonzo zezimali ezingahlali phantsi, ezingenamvume kunye nokwabela amagunya ngokugxila kwi-bitcoin."
I-CEO yaqaphela ukuba iqonga lijolise "ukuvumela izimvo ezingakumbi malunga nezezimali ezinatyisiweyo kwi-bitcoin stack kunye nozinzo olunikezelayo kunye nako konke ukomelela obekukho kule minyaka ilishumi nangaphezulu."
UDorsey wathi: “Siza kukhupha iinkcukacha ezithe vetshe malunga nento eyenziwa yi-TBD ngephepha elimhlophe ngoNovemba 19.” Ukwaqaphele ukuba:
"Zombini zigxile ekuncedeni i-bitcoin ifikelele kubaphulaphuli abaqhelekileyo ngelixa kwangaxeshanye isomeleza inethiwekhi kunye ne-ecosystem."
Okokugqibela, umseki we-Square kunye ne-Twitter ubhengeze ngexesha lokufumana umvuzo weveki ephelileyo ukuba:
"Siza kwakha zombini ekuhleni, ngentsebenziswano noluntu, sabelane ngazo zonke izigqibo zethu, inkqubela phambili kunye nemibuzo endleleni."
tags Bitcoin, Cryptocurrency, iindaba, SQUARE
INigeria ikwinqanaba eliphezulu kakhulu kwi-Cryptocurrency Adoption: Ingxelo yoMfumani
Ngokwengxelo entsha evela kwi-Finder Cryptocurrency Adoption Index, ngo-Okthobha, iNigeria iye yagqwesa kuluhlu oluphezulu lobunini be-cryptocurrency kwihlabathi liphela, kwi-24.2%.
Ukongeza ekubeni nelona nani liphezulu lobunini be-crypto ngabemi behlabathi jikelele, ingxelo ikwaveze ukuba “Kumntu om-1 kwaba-4 abakwi-intanethi eNigeria abanohlobo oluthile lwe-cryptocurrency, i-bitcoin yeyona ngqekembe idumileyo eNigeria kwi-66.5% yabanini be-crypto. Oku kuthetha ukuba ngaphezu kwesiqingatha sabaphenduli ababephethe i-crypto owned Bitcoin (BTC).
Okwangoku, uphando lubonise ukuba i-Ethereum (ETH) ibanga indawo ezimbini njengeengqekembe ezizithandayo kubanikazi baseNigeria, kwi-23.8%. Ngaphandle komgangatho ophezulu womdla we-Ethereum kwihlabathi jikelele, inani labantu baseNigeria abayibambe libonisa ukuba abayithandi kakhulu. Uphando luqaphele ukuba i-23.8% yobunini be-ETH ibeka ilizwe laseAfrika elinabantu abaninzi kwi-15 kumazwe angama-22.
Ngaphezu koko, uphando lubonise ukuba i-Dogecoin (DOGE) yingqekembe yesithathu eqhelekileyo yabemi besizwe saseNtshona Afrika, kwi-21.8%. Eli nani libeka iNigeria kwindawo ezilishumi eziphezulu ngokwemigaqo yobunini beDogecoin phakathi kwamazwe. Uphando luchaze ukuba:
“I-Dogecoin lukhetho lwesithathu oluthandwa kakhulu ngabamkeli be-crypto eNigeria, kunye ne-21.8% yabantu abadala abangabanini be-crypto abaphethe ingqekembe. Oku kuyenza ibe lilizwe elikwindawo yesi-8 kuluhlu lwethu lwamazwe angama-22 ngokobunini beDogecoin phakathi kwabo bane-crypto.
Amadoda ali-1.7 Amaxesha anokwenzeka ngakumbi ukuba abe ngabanini beCrypto kunaseNigeria
Okubangel 'umdla kukuba, uphononongo lufumanise ukuba 62.9% of abanini cryptocurrency e Nigeria amadoda, lo gama abafazi akhawunti intsalela, 37.1%. Oku kuthetha ukuba amadoda angama-1.7 amaxesha amaninzi okuba ne-crypto kunabasetyhini. Ngomlinganiselo wehlabathi jikelele wokungalingani ngokwesini kwi-1.5, iNigeria ine-11th ephezulu yolawulo lwamadoda kumazwe angama-22.
tags Bitcoin, Cryptocurrency, iindaba, Nayijeriya
Ngaba iimbaleki eziPhezulu zityebile kunabaphathi beNgxowa-mali abaPhezulu?
Ukuhlaziywa: 30 October 2021
Phawula: Esi siqwenga sapapashwa okokuqala ngo-2014, ngoko ke ezinye iinyani kulo ziphelelwe lixesha. Nangona kunjalo, inyaniso edlulayo ayiphelelwa lixesha.
"Ukuba uyayiqonda le ndlela yokucinga-ukuba ngokuthatha umngcipheko ngokuhlakanipha ungenza imali ngokuhamba kwexesha-kuyakuphucula ukuzimisela kwakho ukuthatha umngcipheko." - UBruce Bower
Ithini impendulo kumbuzo owenza umxholo wale sahluko? Impendulo nguHAYI omkhulu! UFloyd Mayweather, uLeBron James, uCristiano Ronaldo, uTiger Woods, uRoger Federer, uLewis Hamilton, uMahendra Singh Dhoni, uCliff Lee, u-Usain Bolt, njl.njl. Uphumelele impumelelo kunye nodumo olunokuphupha kuphela kwizigidi ngezigidi zabantu. Nangona kunjalo, nganye yazo ihlwempuzekile xa ithelekiswa nabaphathi beemali abahlawulwa kakhulu kwihlabathi.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba yeyiphi na iimbaleki zeenkwenkwezi ezichazwe apha ezifumana apha, kuya kufuneka uzenzele ngokwakho uphando. KwiBuzz.money.cnn.com, u-Jesse Solomon ubonakalisa uluhlu lwabaphathi abalishumi abahlawulwa kakhulu kwi-hedge fund ngo-2013: David Tepper, Steven Cohen, John Paulson, James Simons, Kenneth Griffin, Israel Englander, Leon Cooperman, Lawrence Robbins, Dan ULoebb noPaul Tudor Jones.
UDavid Tepper ufumene i-3.5 yezigidigidi zeedola kunyaka ophelileyo. Ngo-2009, wafumana i-4 yezigidigidi zeedola. Okwangoku uxabisa i-10 yezigidigidi zeedola. Ubutyebi bukaDavid bugqweswe nangaphezulu lee kunalawo amanye amabali entengiso afana noCarl Icahn ($ 24.5 billion) noGeorge Soros ($ 26.5 billion). Andifuni nokukhankanya iWizard / iSage / iOracle yeOmaha.
Ucinga ukuba yimalini intshatsheli yomdlalo wamanqindi njengoFloyd Mayweather? Ufumene i-105 lezigidi zeedola, kungoko esenza ukuba ibe yeyona mbaleki ihlawulwa kakhulu kwihlabathi. Noxa kunjalo, umphathi weshumi we hedge fund ohlawulwa kakhulu ngu Paul Tudor Jones owafumana umvuzo we $ 600 yezigidi ngo 2013. Oku kuthetha ukuba uPaul usisityebi esiphindwe kahlanu kunoFloyd ngokwengeniso yonyaka ophelileyo. Ixabiso likaPaul lixabisa i-4.5 yezigidigidi zeedola.
Owona mdlali webhola ekhatywayo ohlawulwa kakhulu kwihlabathi ngexesha lokubhalwa nguCristiano Ronaldo, ongaphantsi kwe- $ 100 yezigidi kwimivuzo iyonke ngonyaka; ukanti umvuzo wakhe uphinda-phindwe kathandathu umncinci kunowomphathi wezezimali ohlawulelwa kakhulu ehlabathini.
Uyayibona kengoku inqaku lam? Ihlabathi lezorhwebo livelise uninzi lwezigidigidi-zangaphambili nezangoku. Aba barhwebi bazizityebi ngokugqithileyo kwaye ingeniso yeembaleki ezibalaseleyo iba lilize xa ithelekiswa nemivuzo yabo baphathi beemali.
Kuyinyani ukuba iimbaleki eziphezulu ziyakonwabela ukuqaqanjelwa liliso lomzi kwaye zithandwa kakhulu ngenxa yamashumi amawaka abalandeli kwilizwe liphela. Abanye abathengisi abaziingcali abadumi ngenxa yokuba bathengisa ngasemva kweekhompyuter zabo kwintuthuzelo yeeofisi zabo. Uninzi lwabantu alubazi, gcina abantu abanomdla abathengisa kakhulu / abatyali mali ngokwabo. Xa uninzi lwabalandeli bebhola ekhatywayo bethetha ngendlela abazizityebi ngayo abadlali ababathandayo, bahlala bengazi ukuba abanye abathengisi abaziingcali batyebile kakhulu kunabo.
Ngexabisa i-1.1 yezigidigidi zeedola, iNew York Knicks lelona qela libaluleke kakhulu kwi-NBA yowama-2013 (ngengeniso yezigidi ezingama-243 zeedola ngaloo nyaka). I-Real Madrid lelona qela lezemidlalo lixabisekileyo, lixabisa i-3.3 yezigidigidi zeedola (ngengeniso eyi- $ 700 yezigidi ngonyaka). Nangona kunjalo, uDavid Tepper, ongenguye umrhwebi osisityebi emhlabeni (kuphela oyena mntu uhlawulelwayo kunyaka ka-2013) usisityebi kakhulu kuneNew York Knicks kunye neReal Madrid zidityanisiwe. Ngokuka-Jesse, abaphathi abaphambili be-25 bathathe i-21 yezigidigidi zeedola phakathi kwabo kunyaka ophelileyo.
Kuya kufuneka uvuyisane nawe ngokuba ngumrhwebi, ngaphandle kwamava akho kwiimarike. Abarhwebi abazizityebi abakhange babe zizityebi ngephanyazo, kwanezona mbaleki zityebileyo, kuba uninzi lwazo lwalunesiqalo esithobekileyo. Ngokuhlengahlengisa iindlela zakho zokurhweba ukufezekisa uloyiso olungapheliyo kwaye unamathele kwezi ndlela, kungekudala uza kufikelela kwinkululeko yezemali (nangona ungalufumani uluhlu lwabarhwebi abahlawulwa kakhulu).
Esinye isicatshulwa esivela kuBruce Bower siphelisa esi sahluko:
"Gxila ekwenzeni izigqibo ezinobungozi / zomvuzo, ukugcina ilahleko zincinci, kwaye uza kuqala ukuba nenzuzo."
Ithathwe kwincwadi “Livule ithuba lokuShishina”
tags David Tepper, UJames Simons, John Paulson, UKenneth Griffin, USteven Cohen
I-United States Iba yi-Cryptocurrency ye-Mining Epicenter phakathi kwe-China ye-Crypto Ban
Ukuhlaziywa: 14 October 2021
I-United States iye yaba sisiseko sehlabathi semigodi ye-cryptocurrency (i-Bitcoin) kulandela ukufuduka kwabantu abaninzi base China ngenxa yokuxinana ngurhulumente wase China.
Urhulumente wase-China uthathe imeko enobutshaba ngokuchasene nomzi mveliso we-cryptocurrency ukulawula umngcipheko wezezimali kuloo mmandla. I-China yaba kukuzalwa kweBitcoin kunye nemigodi ye-crypto ngo-2009 ngenxa yombane wayo otshiphu ovela kumalahle nakwizityalo zehydro.
I-United States yenza i-35.4% yeHlabathi yeHlabathi yeHash
Ekupheleni kuka-Agasti, i-United States yenza i-35.4% yenqanaba le-hash yehlabathi, ngokweCambridge Centre yeZifundo eziNye zezeMali ezipapashwe izolo. Eli nani limele ukwanda kwe-100% ukusuka kwinani elirekhodwe ngo-Epreli.
Oko bekuthethile, injongo yase China yokususa imisebenzi ye-crypto ivelise iziphumo ezibonakalayo kulo mmandla, kulandela ukomelela kweenzame zokunqanda i-Beijing ukusukela nge-Meyi ka-2021. iye yehla kwi-zero. Ngokomxholo, eli nani lichukumise iipesenti ezingama-75 ngoSeptemba 2019. Ukusukela ngo-Epreli walo nyaka, eli nani lehle laya kwi-46%.
Ngelixa ukusebenza kwemigodi ngokungekho mthethweni kusenokwenzeka e-China namhlanje, imisebenzi yabucala (yezomthetho) yezemigodi iye yafudukela kweminye imimandla enobuhlobo, njenge-United States. Kwakhona, i-spikes zamva nje kwizinga le-hash elivela eIreland naseJamani kungenzeka ukuba zibangelwa ngabavukuzi basebenzisa iiVPN okanye iiseva zommeleli, ngokutsho kwabaphandi baseCambridge.
Xa abasebenzi basezimayini befumana iindawo zokuhlala kumazwe anobuhlobo ngombane wexabiso eliphantsi, ii-cryptocurrensets zikwinqanaba lokubuyisa iindawo eziphakamileyo ezixabisekileyo. Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin iphantse ibe yi-12% ukusuka kwi-65,000 yeedola, ngelixa i-Ethereum (i-ETH / i-USD) iyi-15% kuphela ukusuka kwi-4,370 yayo yeedola ngalo lonke ixesha.
tags Bitcoin, iTshayina, I-Crystalcurrency Mining, iindaba, eunited States
IVenezuela yokuVumela ukuHlawula ngeDijithali yemali kwiitikiti zeenqwelo moya
I-Cryptocurrency ifezekisile olunye uloyiso oluncinci njengeSimón Bolivar International Airport yaseVenezuela, ebizwa ngokuba yiMaiquetía, iceba ukuvumela abathengi ukuba babhatale amatikiti enqwelomoya ngeemali zedijithali, kubandakanya iBitcoin, iDash, nePetro.
Ethetha ngophuhliso lwamva nje, uMlawuli wesikhululo seenqwelomoya, uFreddy Borges, uqaphele ukuba i-Sunacrip elawula i-Venezuela iza kuququzelela inyathelo:
"Siza kwenza iqhosha eliza kwenza intlawulo yeemali ezigcina imali kwiqonga lezikhululo zeenqwelo moya nakwimisebenzi yorhwebo, ngokusebenzisana neSunacrip."
Ngokunyuka kokufika kwabakhenkethi baseRussia nabaseYurophu kwiindawo ezithandwa kakhulu ngabakhenkethi eVenezuela, uBorges uqaphele ukuba eli nyathelo liza kwenza abahambi ukuba batyelele iindawo ezininzi zesizwe soMzantsi Merika kwaye bomeleze uqoqosho lwayo. Ukuzibophelela kuya kunyanzelisa i-Maiquetía Airport ukuba inyuse imigangatho yayo. UMlawuli uqaphele ukuba:
Njengokuba abakhweli baseRussia befike eMargarita, bazokuza naseLa Guaira, ngeConviasa, ke kufuneka siqhubele phambili kwezi nkqubo zintsha zoqoqosho nezobuchwephesha ezinokufikelelwa.
Isikhululo senqwelomoya saseMaiquetía sesona sikhululo seenqwelomoya esikhulu kunye nesango eliphambili eVenezuela. Ime kumantla ntshona kwikomkhulu iCaracas kwaye ilawula iinqwelomoya zasekhaya nezamazwe aphesheya.
IVenezuela inobudlelwane obomeleleyo be-Cryptocurrency
Ngaphandle kokusebenza phantsi kolawulo lobuzwilakhe, iVenezuela — eyothusa uninzi — yamkela imeko yobuhlobo kwi-cryptocurrency. Imeko yezemali ilizwe elizifumana likuyo liyinyanzelisile ukuba iphuhlise ubudlelwane obuhle beBitcoin kunye nezinye iiasethi zedijithali. Ngaloo nto, iba yinto engummangaliso ukuba kutheni amazwe aseLatin America ekhokela umhlaba ngokwe-crypto ukwamkelwa.
Ngo-2020, uBurger King Venezuela wavumela abathengi baseCaracas, ikomkhulu lelizwe, ukuba bahlawule ukutya kwabo nge-crypto, kubandakanya iBitcoin, iLitecoin, i-Ethereum, iBinance Coin, iDash kunye neTether.
Eli nyathelo lavula iminyango yoku-odola ii-franchise zokutya ezinjengePizza Hut ukuvumela izidlo ukuba zihlawulise amatyala azo ngee-asethi zedijithali, njengeBitcoin, i-Ethereum, iDash, iLitecoin, iBinance Coin, kunye nokunye. Emva koko, isibonelelo sokuhlawula i-crypto safumaneka kuwo onke amabala ePizza Hut eMaracay, Maracaibo, naseBarquisimeto.
tags Cryptocurrency, iindaba, Venezuela
Ifemi yeMigodi yeBitcoin yokwakha ifama yeMega eArgentina
I-Nasdaq edwelise iBitfarms, inkampani yemigodi yeBitcoin, ibhengeze kwiveki ephelileyo ukuba iqalile ukudala i "Mega Bitcoin ifama yemigodi" eArgentina. UBitfarm uqaphele ukuba eli ziko liya kuba nakho ukunika amandla amawaka abasebenzi basezimayini abasebenzisa umbane ofunyenwe ngesivumelwano kunye nenkampani yabucala yamandla.
Eli ziko liza kuzisa iimegawathi ezingama-210 kumthamo weziseko zophuhliso kwinkampani, ethi ibike ukuba inamandla okumba umgodi we-1.4 exahash ngomzuzwana (EH / s) ukusukela ngoSeptemba.
Ethetha ngophuhliso, u-CEO weBitfarms uEmiliano Grodzki uqaphele ukuba:
"Indawo yethu entsha yemveliso ephezulu eArgentina, ekulindeleke ukuba ihlale ngaphezulu kwabasebenzi basemgodini abangama-55,000 xa igqityiwe, iyakwandisa kakhulu amandla ethu kunye nehlabathi."
Umphathi omkhulu uthe le fama izokunceda inkampani ukuba iphumeze iinjongo zayo nge 8 EH / s ekupheleni kuka 2021.
IArgentina inokuba yindawo yokuBiwa kweMigodi yeBitcoin
UGrodzki uqaphele ukuba ifemu ikhethe iArgentina kuba ifama iza kwakhiwa kwiindawo zokugcina ngaphakathi kwenkampani yamandla, iyenze indawo ebalaseleyo yeBitfarms. Inkampani yezemigodi ityikitye isivumelwano seminyaka esibhozo, i-210 MW kunye nenkampani yabucala yamandla ngamaxabiso asezantsi kakhulu. I-CEO yeBitfarms ichaze ukuba:
"Iziko laseArgentina licwangciselwe ukuvelisa iBitcoin kusetyenziswa amandla kumgangatho onomtsalane we-US 2.2 yeesenti ngeyure nganye yekilowathi, kunciphisa kakhulu iindleko zethu esele ziphantsi zemigodi yeBitcoin."
Oko kwathiwa, eli ziko ngoku lisakhiwa kunye nenkampani yokwakha yaseArgentina iProyectos y Obras Americanas SA ('PROA'), ebeka isiseko sombane ofunekayo.
IArgentina iye yaba yenye yezona ndawo zifunwayo zokufumana izibonelelo zemigodi ngenxa yamandla ayo amaninzi kunye nexabiso eliphantsi kwimimandla ethile. IBitfarm ilithathile eli thuba kwaye yakhetha isizathu esinamandla okuvelisa amandla kunye nemfuno ephantsi. Abahlalutyi baqikelela ukuba ezinye iinkampani zemigodi zingalandela iinyawo zeBitfarms kungekudala.
tags Argentina, Bitcoin Mining, Cryptocurrency, iindaba
I-Bitcoin iya kuba yiThenda yezoMthetho kumazwe amahlanu kunyaka ozayo: i-CEO yeBitmex
Ukuhlaziywa: 11 October 2021
I-CEO ye-behemoth ye-cryptocurrency yokutshintshiselana ngeBitmex uAlex Hoeptner wenze uqikelelo oluthile lokuphakamisa Bitcoin ukwamkelwa. Isigqeba seBitmex kutshanje sithe:
“Uqikelelo lwam kukuba ekupheleni konyaka ozayo, siza kuba namazwe amahlanu ubuncinci abamkele i-bitcoin njengethenda esemthethweni. Zonke ziya kuba ngamazwe asaphuhlayo. Yiyo le nto ndicinga ukuba amazwe asaphuhlayo azokungena kwi-crypto ngo-2022. ”
U-Hoeptner ukhusele ukubikezela kwakhe ngokunikezela ngezinto ezintathu ezinokuqhuba ukwamkelwa kwe-BTC kumazwe asaphuhlayo.
Izizathu zikaHoeptner zokuThathwa kweBitcoin njengeThenda yezoMthetho ziZizwe
Into yokuqala yokuhlawula. I-CEO iqaphele ukuba imali ethunyelwayo yenza iipesenti ezingama-23 ze-El Salvador's GDP ngo-2020.
Idatha ebhekisa kwiBhanki yeHlabathi, isigqeba seBitmex siqaphele ukuba amazwe anengeniso esezantsi kunye nephakathi bafumana iipesenti ezingama-75 zerhafu iyonke yokuhlawulwa. U-Hoeptner wathi: “Le mali kufuneka ifumane indlela egodukayo ngandlela thile. Kodwa le nkqubo ikhoyo yokuthumela imali - ekhokelwa ngababoneleli beenkonzo zemali njenge-Western Union - ixhaphaza abantu ngokubabiza umyinge we-10%, ukuze bathumele imali ekhaya kusuku olulandelayo lweshishini. ”
Into yesibini ka-Alex Hoeptner yokwamkelwa kwe-Bitcoin ngamazwe ngamaxabiso emali. Ucacisile ukuba ukunyuka kwamaxabiso kwihlabathi liphela kubetha phezulu, abantu baye baphoxeka ngakumbi kwaye bafuna ezinye iindlela kunezezimali ze-fiat phakathi kweengxaki zokunyuka kwamaxabiso. Wachaza ukuba: "Njengokuba ukunyuka kwamaxabiso kunyuke ngaphezulu kwe-15% kulo nyaka eTurkey, ukwamkelwa kwe-crypto kwanda. I-Turkey iphendule ngokukhawuleza ukuvala ukusetyenziswa kwe-crypto kwimpahla kunye neenkonzo, kodwa ngoku amaxabiso akwi-19.25%. ”
Hoeptner wongeze ukuba:
“I-Bitcoin iyayilungisa le nto, kunye nokuhanjiswa kwayo kwe-21 yezigidi. Kwaye amazwe ahambele phambili- kunye nabantu bawo-bayaqaphela. ”
Okokugqibela, into yesithathu ye-CEO kwezopolitiko. U-Hoeptner waphikisa ukuba uninzi lwezopolitiko okanye abalawuli kwihlabathi jikelele “Banobuchule kwaye banobuchule, kwaye banomdla wokuzibeka njengabanenkqubela phambili, abantu abadumileyo, kunye nabantu abatsha beengcinga.”
Watsho ukuba: "Kunyaka olandelayo, nanjengoko i-El Salvador isenza iikhinki kulwaziso lwayo, abezopolitiko abanobuqili bazakucinga ngendlela abanokuthi bathathe ngayo le ndlela, kunye nendlela enokubaxhamlisa ngayo kunye nabahlali." Isigqeba sicacisile ukuba:
"Into eyenziwa yi-El Salvador kukuthatha ukholo lokuqala, yenza ukuba kube lula ukuqwalasela amanyathelo afanayo ngamanye amazwe."
Nangona kunjalo, i-CEO ilumkise ukuba: “Nakuphi na ukusilela kwezi nkokeli kwisigaba sokumiliselwa kunokwenzakalisa ukwamkelwa ngokubanzi kwemali yamali ngokubanzi. Le yingxaki eyingozi ezayo. ”
tags Ukwamukelwa, Bitcoin, Cryptocurrency, iindaba
← Entsha izithuba1 2 ... 14 abaDala izithuba →